अनाैठा हर्कत देखाउँदै हब्बल टेलिस्कोप, के के मा समस्या भेटियो? - Technology Khabar
» अनाैठा हर्कत देखाउँदै हब्बल टेलिस्कोप, के के मा समस्या भेटियो?
अनाैठा हर्कत देखाउँदै हब्बल टेलिस्कोप, के के मा समस्या भेटियो?
Technology Khabar २ चैत्र २०७७, सोमबार
गएको मार्च ७ तारिखमा हब्बल टेलिस्कोपले अचानक यसमा रहेको विज्ञानसम्बन्धी अवलोकन गर्ने कार्य बन्द गर्यो। उक्त अन्तरिक्षयानको समग्र संरचना हेरविचार गर्ने स्वचालित प्रणालीले उक्त अवलोकन कार्य बन्द गरेको थियो।
यसले टेलिस्कोपको काम बन्द गरेर यसलाई सेफ मोडमा राखेको थियो। यसको कारणमा यस अन्तरिक्षयान भित्रको मुख्य कम्प्युटरको सफ्टवेयरमा खराबी आएको बताइएको थियो।
हब्बलले देखाएको उक्त हर्कत केवल सुरुवात मात्र थियो। त्यसपछिका केही हप्ता हब्बलसँग सम्बन्धित इन्जिनीयर र वैज्ञानिकहरुले धेरै समस्या भोग्नुपर्यो।
अमेरिकी अन्तरिक्ष नियोग नासाले एउटा ब्लगमा हब्बलमा उक्त समस्या बिहान ४ बजे आएको र यसका वैज्ञानिकहरुले जाँच गर्दा उक्त अन्तरिक्ष यानको सफ्टवेयरमा गरेको अपडेटमा केही कुरा अपुग भएको भेटेका बताएको छ।
उक्त यानमा रहेको पुरानो जाइरोस्कोप सेन्सरले पहिले जसरी काम नगरेकाले त्यसमा रहेको टेलिस्कोपलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि उक्त नयाँ सफ्टवेयर अपडेट गरिएको नासाले जनाएको छ।
‘हब्बल टिमले उक्त अन्तरिक्ष यानमा रहेको कम्प्युटर मेमोरीको कुनै निश्चित ठाउँमा नयाँ अपडेट गरेको डाटा राख्न नसकेकाले सेफ मोडमा गएको हो’, नासाले ब्लगमा उल्लेख गरेको छ।
यसबाहेक अन्य अनपेक्षित समस्याहरु पनि भेटिएका छन्:
नासाले उक्त समस्या समाधान गरी टेलिस्कोपलाई पुरानै लयमा फर्काएर काम गराउन प्रयास गरिरहेको बताएको छ। तर उक्त टोलीले अन्तरिक्ष यानको प्रणालीमा रहेको खराबी जाँच गर्ने क्रममा यसको आफैं बन्द हुने ढोका खोलिएको भेटेका थिए। टोलीका यो अर्को नयाँ समस्या हो।
अन्तरिक्ष यान सिधै सूर्यतर्फ फर्कियो भने भित्रका सम्वेदनशील सामान तथा उपकरणहरु बिग्रिने भएकाले यस्तो बेला उक्त ढोका आफैं बन्द हुनेगरी बनाइएको थियो।
टोलीले ढोकामा लगाइएको मोटरमा आवश्यक कमाण्ड दिएर हेर्दा कुनै हलचल नभएपछि यस्तै समयका लागि भनेर राखिएको ब्याकअप मोटरबाट उक्ता ढोकामा रहेको समस्या समाधान गर्ने नासाको तयारी छ।
यसबाहेक उक्त यानको ३ नम्बरको वाइड फिल्ड क्यामेरामा पनि अनपेक्षित समस्या देखियो। नासाले क्यामरामा भएको समस्याबारेमा विस्तृत विवरण नदिए पनि समस्या समाधान नहुन्जेल उक्त क्यामरालाई प्रयोगमा नल्याउने बताएको छ।
प्रकाशित: २ चैत्र २०७७, सोमबार
उच्च तहका दुई नयाँ मेटबुक ल्याउँदै ह्वावे
प्रदेश ६ र ७ मा एडिएसएस फाईवर विस्तार गर्न सम्झौता
गृह मन्त्रालयले भन्यो- मोबाइल,सामाजिक संजालमा आएका संकटकाल कर्फ्यु लाग्ने भन्ने सूचना भ्रामक
मोबाइल मेला २०१६ आजदेखि शुरु, पूर्व युवराज पारस शाहले गरे उद्घाटन (फोटो फिचरसहित)